Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iqonga elitsha leDijithali kuKhuphiswano lukaMiss Universe
I-ImpactWay, iqonga leendaba zoluntu, libhengeze ubambiswano lwayo kunye noMiss Universe Organisation ekuxhaseni uKhuphiswano lwe-MISS UNIVERSE lwama-70, lusasazwa kwihlabathi liphela nge-12 kaDisemba 2021, ngo-7 pm EST ukusuka e-Eilat, kwaSirayeli.
I-ImpactWayv yenye indlela eya kumaqonga amakhulu enethiwekhi yoluntu. Isebenza njengohlobo olutsha ngokupheleleyo lwe-ecosystem yedijithali, egxile kwizinto ezilungileyo zentlalo kunye nokwenza ukuba abasebenzisi-abantu, amashishini, kunye nabangenzi nzuzo-ukuba benze, babandakanyeke kwaye babelane ngempembelelo yentlalo kwinqanaba lehlabathi.
I-app ye-ImpactWayv isetelwe ukuxhasa unxibelelwano lwehlabathi jikelele lwempembelelo yoluntu kunye nokuzibandakanya kuluntu lwehlabathi lwabakhuphisana noMiss Universe abavela kumazwe aphantse abe ngama-80, kunye nabalandeli babo, abalandeli, kunye nababukeli kwihlabathi liphela, bafikelele kubabukeli abaphantse babe sisiqingatha sebhiliyoni.
Njengenxalenye yoKhuphiswano lwe-MISS UNIVERSE lwama-70, i-ImpactWayv ikwabamba umceli mngeni phakathi kwabo bonke abathunywa ukuba benze ezona “impembelelo” kwi-ImpactWayv app phakathi kwabalandeli nabalandeli babo. Iimpembelelo yi-ImpactWayv's entsha ye-proprietary ye-social engagement metric, ukulinganisa ulwazi olwenziweyo kunye nezenzo ezikhuthazwe yintshukumo eqongeni.
Umceli mngeni we-ImpactWayv uvulelekile kumntu ngamnye okhuphisanayo kwaye uqhuba ngokuqhubekayo ukuya kutsho nge-11 kaDisemba, 2021. Ophumeleleyo kumngeni, njengoko kumiselwe ngowona mlinganiselo mkhulu weeMpembelelo kunye nobuchule bubonke, uya kubhengezwa ngexesha losasazo lwe-TV kwaye uya kufumana umnikelo yi-ImpactWayv uthando olukhethwa ngumgqatswa.